कोरिया बाध्यता :: Hello NEPAL KOREA dot com ::
विएस्सी फस्ट सेमेस्टरको स्टुडेन्टलाई मैले अठारौं जन्मदिन ‘वर्थडे’ को सुभकामना दिएपछि उनले
रिप्लाईमा लेखेका थिए–
‘यो मेरो रहर होइन । बाध्यता हो । दाई, म पनि कोरिया आउन चाहन्छु । कोरियन भाषा परीक्षा कहिले हुन्छ होला ? कोरिया आउन कति उमेर हुनुपर्छ र कति खर्च लाग्छ ? बताइदिनुहोला न ।’
‘ए भाई, यती सानै उमेरमा कोरिया नै किन आउनुप¥यो त ? घरमै बसेर विएस्सी पढिरहेको मान्छे । आफ्नै देशमा केही गर्न सकिन्छ नी यार ।’
मैले जिक्कियको स्टिगरसहित लेखें ‘तिम्रो ओठ निचो¥यो भने दुध आउन सक्छ ? सायद, जुंगाको रेखी पनि बस्न पाएको छैन होला ? यस्तो कलिलो उमेरमा कोरिया आएर दुख्ख पाउँछौ । कोरिया तिमीले सोचेँ जस्तो सजिलो पनि छैन । त्यसैले, नेपालमै आफ्नो करियर बनाउनतीर लाग्दा उचित हुन्छ नी ।
भोलीपल्ट जवाफ आयो ‘के गर्नु दाई ? नेपालमा बसेर ? तपाई जान्न चाहनुहुन्छ ? एकपटक नेपाल आएर हेनुर्स् ।’ उनले ठुस्सिएको स्टिगरसहित टेक्स पठाए । ‘दाई, म तपाईको फेसबुकको फलोहर हुँ र सुभचिन्तक पनि । यो सानै उमेरमा प्रदेश पस्नु मेरो पनि रहर कहाँ हो र ? समाज र राष्ट्रको परिस्थिति र पारिवारको बाध्यताअनुसार नै मैले सोँच बनाएको हुँ । यदि, सक्नुहुन्छ र चाहानुहुन्छ भने कोरिया आउने उपाय बताइदिनुहोस् । आभारी हुने थिए ।’
मैले नम्बर मागें र फोन डाएल गरें ।
कोरियन जनजिवनका कति कुरा सुनाएँ । स्वदेशका कति कुरा बुँझाए । सक्नेजति फकाए । अलिकति आफ्नो पन देखाएँ । अलिकति कोरियाका दुख देखाएँ । अलिकति आश्वासन देखाएँ । अलिकति स्नेह देखाएँ । र कोरियन भाषा होइन, विएस्सीनै नियमित पढ्न लगाएँ ।
त्यसपछि उनीसंग नियमित म्यासेज आदानप्रदान भइरह्यो । अत्यन्तै अध्ययनशील, मिहेनती र समझदार छन् । विएस्सी पास गरेर मास्टर डिग्रीको पहिलो बर्षमा अध्ययनरत उनी हाल विहान कलेज पढछन् र दिउसो एक स्कुलमा पढाउछन् । मासिक तीस हजार कमाउछन् ।
धेरै समयपछि हिजो उनले म्यासेज पठाएका रैछन् ‘दाई, मैले स्कुल पढाउन छोडिदिए र कोरियन भाषा पढ्न थाले । तपाईको कुनै प्रतिक्रिया ?’
निकुञ्ज तिवारी का अन्य लेख / साहित्य श्रृजनाहरु
• गजल – ‘सपना उस्तै बिपना’ (गजल)
• आघात (कोरियन परिबेश र व्यबहार ) (लघुकथा)
• तिमीलाई ६० सेकेण्ड (कविता)
• घरफिर्न नपाएकाहरु (कविता)
• गजल (गजल)
• पीडा (लघुकथा)